Linux - JP Markets
Indlela Yokufaka Mt4 On Linux?
I-Linux iyisistimu yokusebenza yekhompiyutha e-Unix ehlanganiswe ngaphansi kwesimiso sokuthuthukiswa kwesofthiwe yamahhala futhi evulekile nokusabalalisa. Izinhlelo ze-Linux zisetshenziselwa kabanzi kuma-Smartphone nakwe-hardware yesiphakeli. Abasebenzisi abaningi basekhaya be-PC bayithanda ku-MS Windows uchungechunge.
Enye yezici ze-Linux ukungabikho kwekiti yokusabalalisa elihlanganisiwe. Amaqembu ahlukene abathuthukisi asebenza kwezinye izinguqulo ze-Linux kuhlanganise no-Debian, Mint, Ubuntu, OpenSUSE, Gentoo, njll Kulesi sihloko sizocabangela enye yezinkampani zokusabalalisa ezithandwa kakhulu – Ubuntu.
Ukuphela kwamaklayenti kungafakwa futhi kugijime kuma-computer ne-Linux esebenzisa iwayini. Iwayini liyisofthiwe yamahhala evumela ukuthi abasebenzisi bezinhlelo ezisekelwe ku-Unix basebenzise uhlelo olwenzelwe izinhlelo ze-Microsoft Windows. Phakathi kwazo zonke izinguqulo zewayini kukhona enye ye-Ubuntu.
Qaphela ukuthi iwayini ayilona isicelo esiphelele. Ngakho-ke, ezinye izinhlelo zokusebenza eziqala ngaphansi kwalo zingasebenza ngokungalungile noma zingasebenzi nhlobo.
Sicela ufunde isihloko esiphelele ngokuphathelene ne-Linux kwiwebhusayithi ye-Metatrader 4. Kufanele ube neminye imibuzo ukhululeke ukuthumela yonke imibuzo yakho ku-support@jpmarkets.co.za
download android mobile mt4 platform
download ios mobile mt4 platform